သူကြီးအတွက် ကာတွန်းလက်ဆောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သူကြီးအတွက် ကာတွန်းလက်ဆောင်
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Dec 22, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 14 comments
အပြောင်းအလဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျနော်ကာတွန်းပုံလေး ဆွဲပြီး ဂေဇက်မှာ ပို့စ်တင်လိုက်တော့ ရွာသူားအများက အားပေးကြတယ်.. ကိုယ်မဆွဲတတ် ဆွဲတတ် ရေးတင်တဲ့ ပထမဆုံးလက်ရာလေးကို အားလုံးက (အားနာပါးနာ) ချီးကျူးကြတော့ အတော်လည်း ပျော်သွားပါတယ်ခင်ဗျား
အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ သူကြီးက ခုလို တောင်းဆိုထားပါသေးတယ်..
အပြောင်းအလဲဆိုပြီး …ပြောင်းလဲအောင်.. ပြောင်းပြပြီး.. ပြောင်းရုံနဲ့မရ..
သူကြီးရေးထားတဲ့ စာသားလေးဖတ်ပြီး ကျနော် သဘောပေါက်သလို ကာတွန်းထပ်ဆွဲကြည့်ပြီး ပို့စ်ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
သူကြီးစကားလုံးတွေနဲ့လည်းကိုက်အောင်၊ ခေတ်ကာလ အဖြစ်အပျက်လေးတွေနဲ့လည်း ကိုက်အောင် ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးစား သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။
ဒီနေရာမှ လူလဲချင်လည်း မလဲချင် လှဲချလိုက် .. မဟုတ်ရင် လဲကျအောင် ကန်ချမယ် ဆိုတဲ့စကားပြောမယ့်သူကို ဘယ်သူလို့ ဆွဲရမလဲ စဉ်းစားကြည့်တော့….
”အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့သည် မိုက်မဲသည့်အလျောက်၊ မလိမ္မာသည့်အလျောက် တွေဝေသည့်အလျောက် သံဃာတော်ကို အစိုးမရခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မိပါ၏။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့အား သံဃာတော်များက နောင်အခါစောင့်ဆည်းခြင်းငှာ အပြစ်ကို အပြစ်အဖြစ် ရှုမြင်လျက် ကရူဏာရှေ့ထား၊ မေတ္တာအားဖြင့် ခွင့်လွှတ်တော်မှုပါဘုရား” ရယ်လို့ ရှေ့ကတိုင်ပေးပြီး ကန်တော့တောင်းပန်စေလိုက်တဲ့ သံဃာတော်တွေကို မြင်ယောင်မိပါတယ်။
ပြောင်းလဲမှုလည်း မလုပ်ချင်၊ နေရာက လဲမပေးချင်၊ လှဲချဖို့လည်း မမြင်တဲ့သူတွေကို ကန်ချမယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆော်ရဲမယ့်သူ နေရာမှာ သံဃာတစ်ပါးပုံကို ဆွဲလိုက်တာပါ..။
ရွာသားတွေ အမြင်ကိုလည်း ဝေဖန်ထောက်ပြပေးပါအုံးလို့ ..
P.S ကာတွန်း category တစ်ခု ထပ်ဖြည့်လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား သူကြီးရေ..
၃ ကွက်ဆွဲတာ ပိုကောင်းမလား?
ကျုပ်တို့လည်း ကိုယ့်တရားအလုပ်ပဲ လုပ်ချင်တာပေါ့ဗျာ
ဒကာကြီးတို့လည်း အပြောင်းအလဲ ဆိုပြီး အနှစ်မပါ အကာအဝတ်ပဲ ပြောင်းရုံ
မလဲနဲ့.. ငါ၊ အတ္တ တံခွန်ထူနေတာတွေ လှဲချကြဦး….
ခင်ဗျားတို့က လဲမရ၊ လှဲမချဆိုတော့.. လဲကျအောင် ကန်ချတဲ့အလုပ်
လုပ်တဲ့သူက လုပ်နေရဦးမှာပဲဗျ လို့ တစ်ကွက်
ခုဟာ တစ်ကွက်ထဲဆွဲလိုက်တော့ စာတွေ ရှည်လွန်းသွားသလိုပဲ
ကိုယ့်ကို နေ့ စဉ် ဆွမ်းကပ်လှူနေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးကို ထိပါးစေမယ့် ကိစ္စမျိုးကိုတော့ ၊ မီးလောင်ဗုံးမကလို့၊ မီးသေနတ်နဲ့ ပစ်မယ်ဆိုရင်လဲ ဆန္ဒပြမယ့် အာဇာနည်တွေပါပဲ
သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိပါဘုရား…
ကာတွန်းဆွဲတဲ့နေရာမှာ ရုပ်ပုံဆွဲတဲ့ ပညာရယ် တင်ပြပုံရယ် ပညာ၂မျိုးပါတယ်ထင်တယ်။
(ကိုယ်ထင်သလို ပြောတာ )
အားမနာတမ်း ဝေဖန်ရရင် ကာတွန်းလက်ရာ ပြောင်မြောက်တယ်။
အန်ကယ်ကြီး ပြောသလို တစ်ကွက်ကာတွန်းလို့ မသတ်မှတ်ပဲ လိုအပ်သလို ၂ကွက် ၃ကွက် ဆွဲရင် ပိုကောင်းမလားလို့။
ဆရာကြီးဦးငွေကြည်(အထင်-ခရက်ဒစ်တူ ဘပု :harr: ) တောင် သူ့ဇာတ်ကောင် ဦးဖျောက်ဆိတ်နဲ့ အာဇာနည်နေ့ အလေးပြုတဲ့ ကာတွန်းမှာ ၄ကွက် (၃ကွက်လား မသိ၊ မသေချာ) နဲ့မှ သူပြောလိုရာကို ရောက်အောင် ပြောနိုင်ခဲ့တယ်။
(comment reply notification ဆိုတာ စမ်းကြည့်တာပါ၊ကြားရင် အကြောင်းပြန်၊ဒါပဲ)
အန်တီ အိုင်ဒီယာကတော့ -စင်ပေါ်က လူရုပ်ကြီး၂-၃ ခုကို အ၀တ်ပြောင်းဝတ်ပေးနေတဲ့လူကို နောက်ကလူတစ်ယောက်က အကြံပေးနေတဲ့ပုံလေးဆွဲချင်တယ်။လူရုပ်တွေရဲ့ အ၀တ်ကတော့ အပေါ်က စစ်အကျီင်္၊ခေါင်းကခေါင်းပေါင်း၊အောက်က ပုဆိုးတောင်ရှည် ၀တ်ပေးနေမယ်။ဖိနပ်က စစ်ဖိနပ်ပေါ့။(စာက -အပြောင်းအလဲဆိုပြီး …ပြောင်းလဲအောင်.. ပြောင်းပြပြီး.. ပြောင်းရုံနဲ့မရ..လူတွေပါလဲရမယ်)
နောက်တစ်ကွက်ကတော့ တွန်းလှဲကြည့်နေတဲ့ပုံ(စာကတော့ – မလဲချင်ရင်.. လှဲချလိုက်…
လှဲမချရင်.. လဲကျအောင်…. ကန်ချရလိမ့်မယ်..။ )
Comment reply notification မရကြောင်း သံချောင်းပြန်ခေါက်ပါတယ်။
comment box အောက်က Notify me of followup comments via e-mail ကို ရွေးထားမှ ရတယ်ထင်တယ်။
ဦးဘဂျမ်း ဆွဲထားတဲ့ ဒီကာတွန်းလေး မဟုတ်လား
ကိုယ်တိုင်လဲ နဲးနဲးပါပါးတော့ဆွဲးဖြစ်ပါတယ်။ ကူးယူထားလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အခုကာတွန်းလေးက စာကိုနည်းနည်းချုံ့နိုင်ရင် တစ်ကွက်နဲ့ပဲပိုလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။
စကားလေးတွေကို ခွဲပြီးပြောတာ ပို ထိမိ မလားလို့
ပိုကောင်းလား မကောင်းဘူးလားတော့ မသိ..
အိုင်ဒီယာ တမျိုးပြပေးတဲ့ တီပဒုမ္မာ
လေယာဉ်မယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပြီး ကာတွန်းဝါသနာပါတဲ့ နန်းတော်ရာသူတို့ကို
ဂေဇတ်ကာတွန်းလေးတွေ ဒီထက် လက်စွမ်းပြမယ့်သူတွေ တိုးလာပါစေဗျား